Ndị a bụ Pọdkastị na-amasịkarị Ndị Obodo Anyị; Martech Zone
Ọ bụrụ n’igebeghị pọdkastị, a ga m agba gị ume. Budata Stitcher ma ọ bụ jiri ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ jiri desktọọpụ gị Podcasting n'elu ikpo okwu. iTunes or Google Play ga-ekwe ka ị chọọ na ịdenye aha ha dị ka mma.
N'abalị ụnyaahụ, anyị nwere mkparịta ụka dị ukwuu na onye ndu mpaghara nke na-azụ ọzụzụ maka obere marathon mbụ ya na 58 afọ. O kwuru na, na ọzụzụ, otu n'ime ihe kachasị mma ọ meworo bụ ịmịnye pọdkastị. Ọ gbalịrị egwu, mana ọ naghị elebara anya na ịgba ọsọ dị ka pọdkastị mere. O nwere ike inwe echiche nke uche n'ime oge nke pọdkastị, na-enyere ya aka ịgbara ọsọ ma zuru ike karịa.
Otu izu gara aga, anyị gbara ajụjụ ọnụ Chris Spangle - ajụjụ ọnụ anyị ga-ebipụta n'oge na-adịghị anya. Chris bụ otu onye na-eduga Podcast na-agba otu pọdkastị ndọrọ ndọrọ ọchịchị kachasị na mba ahụ. Ọ bụbu onye nchịkwa dijitalụ maka otu n'ime redio kachasị ukwuu nke mba ahụ ọtụtụ afọ. Chris ma ụda, ọ ghọtara ihe ndị a na-ekwu anwansi nke pọdkastị dị ka onye m hụtụbeghị.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na enwere usoro nhazi usoro mgbasa ozi - site na ederede, na audio, na vidiyo - ọ dịghị amasị ya ma ọlị. Site na ịge ntị na ịnụ mkparịta ụka, ndị na-ege ntị na-enwe ike ilekwasị anya na mkparịta ụka ahụ karịa ndị ọ bụla na-ajụ ajụjụ. Ọ dị oke ike na ikike ya ịdọrọ anya na ekwesighi ilelị maka azụmaahịa.
Anyị kwenyere na pọdkastị nke ukwuu nke na anyị wuru nke anyị a na-eji nkà na-ese ihe Podcast na ogbe ndịda Indianapolis. Iji mee ka ịmalite, anyị jụrụ nke anyị Martech Zone Community ihe pọdkastị kachasị amasị ha iji mee ka ị bido. Ma obu oburu na ige nti ugbua, ichota ndi ohuru!
Okporo ụzọ Oge Gburugburu - Mgbasa ozi Facebook & ndị ọkachamara na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi Keith Krance, Ralph Burns (Dominate Web Media), na Molly Pittman (DigitalMarketer) na-ekerịta mgbasa ozi Facebook, Mgbasa ozi Youtube, Google Adwords, Atụmatụ mgbasa ozi Twitter na Instagram, usoro na ọmụmụ gbasara otu esi eto. azụmahịa gị ma ọ bụ akara gị site na mgbasa ozi n'ịntanetị.
More Chiiz, obere aji - Gee ntị n'izu ọ bụla dịka Dean Jackson na-enyere ndị nwe azụmaahịa na ndị ọchụnta ego aka dịka ị na-etinye 8-Profit Activators na azụmaahịa ha. Ibe odo na-agba roulette na steroid!
Tojupụtara na Flow - Njirimara isi akụkọ akụkọ na ihe omume dị na mbara igwe, yana ajụjụ ọnụ nke ndị ọkachamara kachasị elu, ndị na-eme atụmatụ na ndị na-eme ihe ike na-enyere aka ịkpụzi ọhụụ maka nchịkọta teknụzụ na ahịa nke echi.
Brainfluence Podcast - Roger Dooley na-ekerịta usoro ịgbadoro ụbụrụ, yana nka nke ndị ọbịa ya, ka iwelie kwenye na ndụmọdụ ndụmọdụ neuromarketing.
Tụgharịa mgba ọkụ - Podcast izu na-eweta site na otu Uberflip, Flip the Switch na-egosipụta mkparịta ụka na-enye mmụta na ndị nwere uche ịche ahịa. A na-ewepụta akụkọ ọhụụ na Tuesday ọ bụla.
Onye Mmekọrịta Ahịa - The Companion Marketing na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ mgbe niile, na ebumnuche na echiche ga-eme ka ọgụgụ isi ahịa gị bụrụ "11."
VB Tinye - VB Engage, pọdkastị na-ere ahịa na-akwụwa aka ọtọ sitere na VentureBeat nke Stewart Rogers na Travis Wright na-akwado.
Uru Ọha - Gee ntị maka ezigbo nghọta banyere ndị mmadụ n'ezie na-arụ ezigbo ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Get nweta akụkọ dị n'ime na nzuzo banyere etu ụlọ ọrụ dịka Ford, Dell, IBM, ESPN na ọtụtụ ndị ọrụ, na-arụ ọrụ ma tụọ mmemme mgbasa ozi mmekọrịta ha.
Obi nke ahia - Nweta nghọta banyere ịre ahịa iji bulie azụmaahịa gị buru ibu site na ịmekọrịta ezigbo obi na ndị ahịa gị.
Ndị ọrụ Ecommerce - Ecommerce Crew bụ Mike Jackness na Grant Chen, ndị nwe ụlọ ahịa nwere iri afọ abụọ nke ahụmịhe jikọtara na azụmaahịa ịntanetị na-aga nke ọma.
ECommerceFuel Podcast - Na eCommerceFuel Podcast anyị na-elekwasị anya na ndụmọdụ, atụmatụ na akụkọ iji nyere ndị nwe ụlọ ahịa isii na asaa aka ahịa ha na ọkwa ọzọ.
Mmetụta Ecommerce - Ecommerce Influence bụ pọdkastị maka onye nwe azụmaahịa ecommerce na onye isi njikwa azụmaahịa n'ịntanetị. Anyị na ndị isi nke ecommerce marketing na akara ngosi anyị nwere mkparịta ụka siri ike, ma nye ọzụzụ na usoro iji nyere gị aka ịgbanwe ọtụtụ ndị ọbịa gị ịkwụ ndị ahịa ụgwọ.
Rụọ Storelọ Ahịa M n'ịntanetị - Ọkachamara n'ahịa eCommerce nke ị tụkwasịrị obi ugbua iji nyere aka rụọ ọrụ na azụmaahịa gị.
MBA Tropical - raara nye ndi na-eto eto nke ndi oru onwe ha na uwa nile.
Ahịa Ahịa a - Agbanyeghi na otutu mmadu chere na ahia ahia di ohuru, na akuko akuko iji dọta ma jigide ndi ahia, ikekwe, nke kacha ochie gbasara ahia. Ahịa Ahịa anyị bụ ụtụ anyị maka eziokwu ahụ.
Podcast Akwụkwọ Ahịa - Ajuju ajuju ajuju ajuju a na-eme kwa izu na ndi ode akwukwo kacha ere ahia ka ha nyere gi aka ikwado ihe n’eme n’ime otutu oge ahia ahia na igba ahia n’oge a.
Ọkaibe Ahịa Podcast - LinkedIn's Jason Miller na-anọdụ ala na ụfọdụ ọkụ na-enwu gbaa n'ịzụ ahịa iji kwuo maka usoro ahịa B2B, omume kachasị mma, wee hụ ma ha nwere akụkọ akụkọ ihere ọ bụla ha chọrọ ịkọrọ.
Smarts nke Ahịa - Pọdkastị a kwa izu na-agba ajụjụ ọnụ nke ọma na ndị na - azụ ahịa ahịa sitere na ngalaba niile. Ndi MarketingProfs na-akwado ya, nkeji 30 a, kwa izu Podcast na-ewepụta nghọta dị omimi na ezigbo ndụmọdụ iji nyere gị aka ịzụ ahịa karịa.
BeanCast - Okwu mkparịta ụka a na-enwe kwa izu na-emetụta ụdị gị. Na-ege ntị?
Ngwaọrụ Dijitalụ - BMC's Digital Outliers nwere mkparịta ụka ya na ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mara mma ka ha na-enyocha ọtụtụ ụzọ teknụzụ dijitalụ si agbanwe ebe ọrụ nke oge a.
Redio Ahịa Dijitalụ - David Bain gbara a niche ọkachamara na ntanetị n'ịntanetị banyere ọkachamara ọkachamara ha - yana ịnweta echiche ha na steeti ịntanetị taa.
Ahịa karịrị kọfị - Ahịa karịrị kọfị bụ ọdịyo nke a na-achọ ma ahịa ahịa ọhụụ na nke ọhụụ. Ndị ọbịa gị, John J. Wall na Christopher S. Penn, na-edekọ ihe nkiri a n'otu ụlọ ahịa kọfị kwa izu ma na-ebipụta ihe nkiri ahụ n'ụtụtụ Tọzdee.
Lọ Akwụkwọ Ahịa - Schoollọ Akwụkwọ Ahịa na-ewetara gị nkeji 10 nke ndụmọdụ ịre ahịa ahịa kwa ụbọchị.Nweta ntuziaka ziri ezi iji were azụmahịa gị na ọkwa ọzọ.
Ndepụta a enweghị usoro ọ bụla, nke m hụrụ n'anya. E nwere ụfọdụ ndị amaara ahịa pọdkastị na ndị m na-anụbeghị banyere ya, m ga-achọpụta. Site na ndepụta dị ka nke a, aga m agba gị ume ịnwale ma gee ntị n'otu ma ọ bụ abụọ iji hụ ma ọ bụrụ na ị masịrị Podcast ma chọọ karịa. Anyị na-atụ anya na ị ga -denye aha na nke anyị Ajụjụ Ọnụ Martech pọdkastị!
Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ nkume bara nnukwu uru ị ga-eji gee ntị!
Tags: anụ ọhịa beancastụbụrụ ụbụrụwu ulo ahia m di na yadijitalụ ahịa dijitalụdijitalụ outliersndị ọrụ ecomndị ọrụ ecommerceEcommercefueltụgharịa mgba ọkụahịa ahịa Podcastonye ahia ahiaahia karịrị kọfịAhịa Podcastụlọ akwụkwọ ahịaire ahịa ahịankataọzọ cheese obere ajiebighi ebiPodcastsuru ọha na ezeọkaibe ahịa Podcastikpo na igbaobi ahiaahia ochie aebe okpomọkụ mbavb itinye aka
Ihe Ọhụrụ (@TNNTnews)
All pọdkastị niile !! Daalụ maka ndepụta ahụ!